စီးပွားပျက်ကပ် | USAHello | USAHello
များစွာသောလူပျော့စိတ်ကျရောဂါခံစားနေရနိုင်သလား. အပျော့စားစိတ်ကျရောဂါကိုသင်ဝမ်းနည်းခံစားရသို့မဟုတ်မရသောအခါသင်ဘာမှလုပ်ခံစားရဖြစ်ပါသည်. နှစ်ယောက်ထက်ပိုရက်သတ္တပတ်အဆုံးစွန်လျှင်, သင်အခြေခံစိတ်ကျရောဂါရှိစေခြင်းငှါ.
သငျသညျဝမ်းနည်းခံစားရသည့်အခါပြင်းထန်သည့်စိတ်ကျရောဂါထက်ပိုနှစ်ပတ်အတွင်းများအတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖြစ်ပါသည်. သငျသညျနေ့စဉ်နေ့တိုင်းပုံမှန်အားဖြင့်သောအရာတို့ကိုသင်ပြုရန်အဘို့အခက်ခဲဖြစ်တဲ့အခါဆိုးဆိုးရွားရွားစိတ်ကျရောဂါဖြစ်တယ်. ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်အိပ်ရာထဲကရဖို့နိုင်စွမ်းရှိသည်နှင့်သင်၏အသွားတိုက်ဘူး. ဒါမှမဟုတ်သင်ကသင်၏သားသမီးရဲ့စွမ်းအင်များအတွက်နံနက်စာပြင်ဆင်ကျောင်းကသူတို့ကိုယူရန်လိုအပ်သောရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး.
သငျသညျစိတ်ကျရောဂါခံစားနေရလျှင်သင်ကအကူအညီရနိုင်. မိသားစုဝင်တစ်ဦးသေလျှင်ဥပမာ, သငျသညျဝမ်းနည်းခံစားရပေမည်. ငါဝမ်းနည်းသလိုခံစားရတယ်, သို့မဟုတ်သင်အလွန်အကျွံအိပ်ပျော်နေသောနေ, ဒါမှမဟုတ်သင်ပိုမိုထက်နှစ်ပတ်စားရန်မလိုချင်ကြဘူးလျှင်မူကား, သင်ကူညီပေးရန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင့်ဆရာဝန်နှင့်အတူစကားပြောနိုင်သည်.